トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Mampatahotra famoriam-bola tonga ka tsy miverina any nisambo-bola?
Ao amin'ny filma sy tantara ny ara-bola ho an'ny foto-kevitra, dia matetika no toe-javatra hita manao ny famoriam-bola mampatahotra manohitra ny mpitrosa.
hatramin'izao ho an'ireo izay tsy mbola nisambo-bola avy amin'ny fikambanana ara-bola, dia mety ho tena miavaka anjara.
satria izany karazana famoriam-bola dia, no natao teo amin'ny tontolo tena izy? Izahay dia namintina ny tantara amin'ny antsipiriany.
ary ankapobeny tsy misy famoriam-bola, toy ny tantara
trosa, mandrahona amin'ny zavatra voalohany maraina banging ny varavarana mafy, dia mety ho maro ny olona izay manana ny sary, toy ny.
Na izany aza, tsy manome no tena tamin'ny voalohany dia ny vola lenders mba hanao toy izany ny famoriam-bola izany. Raha
satria, satria manimba ny orinasa sary, raha zavatra toy izany.
ny antsoina hoe mampatahotra famoriam-bola dia, ny mieritreritra fa ireo tanterahana amin'ny alalan'ny ny haizina ara-bola toy ny jiolahy ny fitantanana ho fady. Ao
, sy ny vola lenders hoe raha manao izay karazana famoriam-bola, raha toa ny mpitrosa dia ny hamaly ela, avy amin'ny fikambanana ara-bola dia mifandray aminareo any am-endrika, toy ny telefaonina sy ny e-mail, taratasy voaisy tombo-kase.
mpijirika tsy misy fifandraisana mivantana.
Na izany aza, raha tsy mandray ny olona sy ny fotoana, dia tsy mahazatra ihany koa fa toy ny fianakaviana sy ny toeram-piasana tonga antso an-tariby.
Noho izany, ka tsy nanenjika ny antoko fahatelo, azo antoka hamaly daty Miezaha haka ny fandraisana ho mpikambana.
famoriam-bola misy toromarika izay nanapa-kevitra ny firenena
Raha ny marina, dia fantatrareo fa ny ara-bola orinasa tenany amin'ny toe-javatra sasany famoriam-bola, toy ny tantara dia mety ho lasa fanitsakitsahana ny lal?na? Moa ampiharina ny fahaiza-manao eo amin'ny zavakanto mba hanatanteraka ny mampisambotra sy nindrana ny
vola, ny vola Mampisambotra Business Lal?na, dia nanorina zavatra dia antsoina hoe "fitsipika ny amin'ny famoriam-bola asa", amin'ny fandikana izany dia iharan'ny sazy.
, ohatra, raha mbola tsy misy antony ara-dal?na, dia misy fitsipika izay tsy maintsy hanatanteraka ny famoriam-bola ho an'ny mpitrosa ankoatra 8:00 pm 9 maraina ny.
lazaina amin'ny teny hafa, toy ny fanohizana ny tsy hiraharaha ny fifandraisana amin'ny moneylenders, raha mbola ny mpitrosa tsy manome mihitsy ny antony, moneylenders no tsy avela ny famoriam-bola mandritra ny andro toy ny manomboka ny asa.
Ankoatra izany, misy ny tanjon'ny lal?na ity mba hiarovana ny fiainana manokana ny mpitrosa, peta-drindrina sy ny famantarana, mazava ho azy, ka mandehana ny famoriam-bola ny trosa tamin'ny feo mahery, manao na Isuwa 'dia fanitsakitsahana. Ka dia ny hoe ny trosa manodidina
dia tsy ho amin'ny mazava, lenders koa dia mila mitandrina.
mba lazainareo fa ny lal?na izany, tany am-piandohana amin'ny andrim-panjakana Financial Services Agency Nanorina tari-dalana ho an'ny famoriam-bola.
Noho izany, ny hetsika dia efa niala, Shirezu mety hatao Nanenjika hanova, moneylenders dia hoe tsy hampiasa famoriam-bola tafahoatra.
ny trosa fanangonana fahafahana misafidy
andrim-panjakana ara-bola, fa tsy ny famoriam-bola ny tao-trano, dia misy koa ny toerana izay fangatahana ho fanangonana ny trosa fahafahana misafidy. Toy ny rehefa hamaly
efa tafahitsoka mivantana an-tsoratra na antso an-tariby, ankoatra ny hifandray tonga, sns, no mampiavaka ny hanatanteraka ny famoriam-bola ao amin'ny feo mafy kely kokoa noho ny ara-bola toy ny andrim-pahaizana manokana eo amin'ny famerenana.
Te ny manamarika eto, hosoka for.
hosoka orinasa maka sary toy ny trosa fanangonana nahay ny zavakanto ihany koa vao tsy ela akory niely patrana. Ankoatra ny
nindrana koa, eo amin'ny endriky ny fifandraisana, toy ny mikendry ireo izay efa nandoa raikitra isam-bolana sy ny finday votoaty, ary hosoka ho amin'ny tsy fantatra ny olona maro. Toy ny
"fifanarahana tsy ny mbola," "maintsy handoa izay nitranga", satria ireo mahay ny teny voalaza an-tsoratra, dia tsy latsa-danja ny raharaha izay nandoa na inona na inona mety ho ny olona izay tsy mahafantatra voafitaka. Raha mbola ny
tsy mahazatra, dia hoy izy dia tsy miraharaha fa ny tsara indrindra.
raha hamaly dia ela, na dia mampatahotra famoriam-bola dia tsy avy amin'ny fikambanana ara-bola, hoy ianareo: fa amin'ny toe-javatra maro momba ny famoriam-bola avy amin'ny matihanina, toy ny trosa fanangonana nahay ny zavakanto.
rehefa misy voasoratra na telefaonina fifandraisana, sns dia ny hatrany lavo, Miezaha mba hahazoana vahaolana tany am-boalohany.
, rehefa nanao ny nindrana, dia zava-dehibe ny manao drafitra mazava hamaly tamin'izany andro izany. Rehefa ho lasa
indrindra hamaly ny maharitra, mba ho Nohavaozina taminy mandoa be dia be ny vola mahaliana izany, dia fantaro ny daty hamaly farany mialoha ny tenanao.
mifandray / Recommended karatra findramam-bola
ny nindram-bola tamin'ny andro
Raha ny hamaly ny ela, na dia mampatahotra famoriam-bola dia tsy avy amin'ny fikambanana ara-bola, hoy ianareo: fa amin'ny toe-javatra maro momba ny famoriam-bola avy amin'ny matihanina, toy ny trosa fanangonana nahay ny zavakanto.